Thursday December 27, 2018 - 21:08:10 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaha dowladda Sacuudiga ayaa isbedel ballaaran ku sameeyay wasaaradaha ugu muhiimsan xukuumaddiis kadib cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ay boqortooyada Aala Sacuud wajahday muddo 2 bilood gudahood ah.
Salmaan Bin C/Caziiz oo ah boqorka Sacuudiga ayaa isku dhaandheyn ku sameeyay golaha wasiirrada waxayna isku shaandheyntan ay saameysay wasaaradaha ugu muhiimsan wadanka.
Amar boqortooyo ayaa xilkii uu hayay looga qaaday Caadil Aljubeyr oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda waxaana lagu bedelay Ibraahiim Bin Cabdul Caziiz Alcasaaf, sidoo kale waxaa shaqada laga eryay Turki Aala Sheykh oo ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaa loo wareejiyay dhanka hay'adda Tamashleynta oo ah hay'ad uu dhisay Max'med Bin Salmaan.
Amiir Cabdalla Bin Bandar ayaa isna loo magacaabay wasiirka ilaalada qaranka, safiikii dowladda Sacuudiga ufadhiyay magaalada London Max'med Bin Nawaaf Bin C/Caziiz ayaa isna shaqada laga eryay.
Isbedelkan lagu sameeyay wasiirrada dowladda Sacuudiga ayaa imaanaya waqti dhaxal sugaha wadankaas Max'med Bin Salmaan uu wajahayo cadaadis siyaasadeed oo uga imaanaya dowladaha reergalbeed iyo kuwa mandiqadda Bariga dhexe tan iyo markii saxafi mucaarad ah lagu dilay qunsuliyadda Aala Sacuud ee magaalada Istanbul caasimadda Turkiga.